रोशनीले ‘कुखुरी काँ’ भन्दा सभामुख महरा ट्वाँ, ४८ घण्टामा के–के भयो ? – ताजा समाचार
रोशनीले ‘कुखुरी काँ’ भन्दा सभामुख महरा ट्वाँ, ४८ घण्टामा के–के भयो ?
काठमाडौं : कुखुरी काँ,
बासी भात खाँ,
खोइ बासी भात,
मुसा मार्न गयो,
दुलो भित्र पस्यो,
स्याप्यै सुक्यो ।
कक्षा १ मा विद्यार्थीहरुलाई पढाउँदा र विद्यार्थीले पढदा निक्कै चाख लाग्ने यो कविता धेरैले मन पराउँछन् ।
सभामुख महरा प्रकरणमा पनि यो कविताको झलझली याद आइरहेको छ । गत आइतबार साँझ करिब ८ बजेदेखि मंगलबा बेलुका ८ बजेसम्मको ४८ घण्टाको अवधिमा भएका महरा प्रकरणसँग सम्बन्धित क्रिया–प्रतिक्रिया र सो प्रकरणमा पीडित भनिएकी रोशनी शाहीको अभिव्यक्तिसँग तुलना गर्दा यो कविता ठ्याक्कै मिल्न पुगेको छ ।
घटना कसरी घट्यो वा बाहिर कसरी आयो त्यो बेग्लै पाटो हो । सार्वजनिक समाचारहरुका अनुसार पीडित शाहीलेनै सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई आफूमाथि यौ,न दुर्व्य,वहार गरेको भनेर भनेकी थिइन् । तर, तिनै शाहीले आफ्नै यस कुराको खण्डन गर्दै अहिले अभिव्यक्ति दिएपछि कुखुरी काँ बाट शुरु भएको यो कविता खोला सुक्यो जस्तै भएको छ ।
त्यस अवधिको ४८ घण्टामा के–के भयो त ?
– आइतबार राति ९ बजेट ३ मिनेट जाँदा पीडितद्वारा १०० मा पीडितको फोन, राति ९ बजेट १९ मिनेटमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वर टोली घटना,स्थलमा
– सोमबार बिहान ७ बजेट ३० मिनेटमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल छलफल, साँझ ७ बजेर ३० मिनेटमा पीडितको हवाला दिँदै का,ण्ड सार्वजनिक
– मंगलबार बिहान ७ बजे सभामुख निवास बालुवाटारमा नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ–महरा भेट
– बिहान प्रधानमन्त्रीद्वारा यस विषयमा चासो व्यक्त
– बिहान ८ बजे पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–महरा भेट
– बिहान प्रचण्ड–ओलीबीच भेटपछि महरालाई राजी,नामा दिन सुझाव
– बिहान ९ बजेर ३० मिनेट प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीबाट प्रमाण संकलन
– पीडि,तसँग छलफल, डीएसपी कृष्णबहादुर चन्दको नेतृत्वमा अनौपचारिक अनुसन्धान सुरु, गृहमन्त्री थापा–वनमन्त्री शक्ति बस्नेतबीच मन्त्री क्वार्टरमा भेट
बिहान १० बजे : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली –पुष्पकमल दाहाल भेटबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल
बिहान ११ बजे : नेकपा सचिवालय बैठक
मध्याह्न १२ बजे : सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई राजीनामा गर्न सुझाव
दिउँसो १ बजेर १० मिनेट जाँदा सभामुख महराबाट उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे सम,क्ष राजीनामा
दिउँसो २ बजेर १५ मिनेटमा गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री– गृहसचिव–आइजीपीबीच छलफल
साँझ ७ बजेर ५ मिनेट : पीडितद्वा,रा बयान फेदै सार्वजनिक